दुई पक्षबीच झडप,प्रहरीद्धारा अश्रुग्याँस प्रहार
कमलामाई खबर सम्वाददाता प्रकाशित: २०७७-४-३२ गते ६९५ पटक हेरिएको
सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिका–५, सखुवनीमा आईतबार दुई पक्षबीच झडप भएको छ । गाउँमा रहेको ऐलानी जग्गामा शव जलाउने घाट बनाउने की ? खेल मैदान बनाउने ? भन्ने विषयमा दुई पक्षबीच झडप भएको थियो ।
विवाद समाधान गर्न दुई पक्षबीच वडा कार्यालयमा छलफल भई रहेको समयमा अचानक झडपको स्थिती सुजना भएकोे थियो । खेल मैदान बनाउनु पर्छ भन्ने पक्ष र शव जलाउने घाट बनाउनु पर्छ भन्ने पक्षबीच झडप भएपछि प्रहरीले ३ सेल अश्रु ग्याँस प्रहार गरेको थियो ।
विवाद मिलाउन केही दिनभित्रै सबै पक्षलाई राखेर थप छलफल गर्ने ईश्वरपुर नगरपालिका–५, का वडाध्यक्ष रुपबहादुर आलेले बताउनु भयो । गाउँमा रहेको करिव दुई विगाह ऐलानी जग्गा कुन प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा केही समयदेखि विवाद चल्दै आएको थियो ।
शव जलाउने घाट र खेल मैदानका विषयमा विवाद भएर झडप भएपछि नियन्त्रणमा लिन बाध्य भएर अश्रुग्याँस प्रहार गर्नु परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका प्रहरी प्रमुख एवम प्रहरी उपरिक्षक विश्वमणी पोख्रेलले बताउनु भयो । प्रहरी अश्रुग्याँस प्रहार गरी झडपलाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।